लहानमा एमाले कार्यालयमा आगजनी – Himalaya TV
Home » समाचार » लहानमा एमाले कार्यालयमा आगजनी
लहानमा एमाले कार्यालयमा आगजनी
२४ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १३:०४
राजविराज, फागुन २४ गते । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले सप्तरीको राजविराजस्थित शान्ति समितिको कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा पनि आगजनी गरेका छन् ।
विहान राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वा७च ७४७३ नम्वरको जिप तोडफोड गरिएको थियो । यसैगरी, मंगलवार विहान सिरहाको लहानस्थित नेकपा एमालेको नगर कमिटी कार्यालयमा आगजनी भएको छ ।
मोर्चा कार्यकर्ताहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट मुस्किलले दुई सय मिटर पश्चिमतिर मुख्य सडकसँगै जोडिएको लहान १ स्थित एमालेको नगर कमिटी कार्यालयमा रहेको फर्निचर, पार्टीका कागजातहरु सडकमा ल्याएर जलाएका हुन् । भाडामा रहेको पार्टी कार्यालयको झ्यालका केही सिसाहरु फुटेका छन् ।
आगजनीपछि लहानको भित्री क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट खुलेका पसलहरु बन्द गराउँदै हिंड्ने क्रममा लहान ८ बाट प्रहरीले मोर्चाका करिब ५० जनाको समूहलाई तितरबितर बनाएको छ । मोर्चाका कार्यकर्ताहरु सिरहाको लहान, गोलबजार, मिर्चैया, सिरहा सदरमुकाम लगायतका ठाउँहरुमा सडकमा टायर बालेर प्रर्दश गरिरहेका छन् ।
मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले आज राती पूर्व पश्चिम सडकको लहान ३ रघुनाथपुरमा सिरहाको भगवानपुरबाट धान लोड गरेर बीरगंजतिर जाँदै गरेको ना.४ ख२०७ नं. को ट्रक र गोलबजारमा मा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेका छन् भने गोलबजारमा इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडिको सडकमा रोकेर राखिएको भारतीय WB 52 A 40 13 नं. को ट्रकमा आगजनी गरेका थिए ।